Site na: KongoLisolona: Ọktoba 17, 2020 00: 30 Enweghị asịsa
Ka anyị kwuo banyere nke a foto biko!
Chọpụta ihe oyiyi na oge na ohere: olee ebe ọ dị na oge ole ??
Ole ndị bụ ndị nnọchi anya foto a?
Gịnị bụ emume ahụ?
Ọkụkọ na-eyi akwa ya mgbe ndị mmadụ anaghị ele ya anya. - Anyị na-ezochi ihe nzuzo nke ahia!
Ọkt26 11: 46